thin – Healthy Life Journal
၀နေလို့ ပိန်ချင်ပါတယ် . . .
မေး ။ လူတစ်ယောက် ပိန်ဖို့ရာမှာ ဘယ်လိုအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ Linhtet(FB) ပါမောက္ခဦးကိုကို(ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ လူတစ်ယောက် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေဖို့ရာအတွက် (၁) အစားအသောက်၊ (၂) လေ့ကျင့်ခန်း၊ (၃) အပြုအမူကုထုံး၊...
၊ ကိုထက် ၊ သန်စွမ်းကြံ့ခိုင်ပြီး ကြွက်သားရှိတဲ့ အမျိုးသမီး ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်တွေက သွယ်လျတဲ့အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ အခုအခါ လက်ခံလာကြကြောင်း လေ့လာမှုအသစ်က ဆိုပါတယ်။ မစ်ဆိုရီကန်စပ်မြို့နယ်တက္ကသိုလ်က ဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ လေ့လာမှုအရ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ၇၈ ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှဓာတ်ပုံတွေကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အမေရိကန်အလှမယ်...
ဘာကြောင့် ပိန်လွန်းရတာလဲ . . .
မေး။ ။ ခန္ဓာကိုယ်က အရမ်းကို ပိန်လွန်းတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါရှင်။ ရောဂါမရှိဘဲပိန်နေလို့ပါ။ မေဇင်အောင် (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ပုံမှန်စားနေပါလျက်နဲ့ ရောဂါအထူးအထွေ မခံစားရဘဲ ပိန်ပိန်ပါးပါးဖြစ်ရုံဆို ဘာမှမဖြစ်ပါ။ အ စားအသောက်ကို မျှတပြည့်စုံအောင် စားပေးဖို့...